Sezvo COVID-19 misiyano ichiwedzera, kumeso kumeso mundege kuri kuchinja
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Sezvo COVID-19 misiyano ichiwedzera, kumeso kumeso mundege kuri kuchinja
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Meso anotarisana nendege
Funga kuti wagadzirira kukwira ndege yako nekuti une kumeso kwako? Batisisa, iwe unogona kunge uri mune kushamisika. Kubhururuka nechiso kumeso panendege refu hakuna kugadzikana. Vamwe vafambi vanowanzo pedza maawa muzvimbuzi kungodzivirira kupfeka mask yavo. Kurambidza kupfeka kwemeso kumeso neDelta Variant inokonzera rekodhi nyowani COVID-19 kesi, hazvitarisirwe.
Wanga uchiziva here kuti imwe nendege ine kugona kuona kwete chete kana kumeso kumeso kunofanirwa kuve kwakapfekwa asiwo rudzii rwekumeso kumeso kunofanirwa kupfekwa kana uri mundege?
Iwe unoziva here musiyano uripo pakati peN95 uye machira ejira maringe nekutaura kuti isina vharuvhu FFP2?
Vazhinji vanhu vanopfeka machira ekumeso emachira, saka ungapfekei kana masiki akagadzirwa nemucheka akarambidzwa?
Ndege dzendege dzinowedzera uye dzave kutanga kurambidza masiki ekumeso akagadzirwa nemucheka, dzichiti iwo hausi chipingaidzo chemhando yepamusoro pakupararira kwe COVID-19, kunyanya muchiedza chekuwedzera kwakanyanya kwezviitiko mazuva ese kutenderera pasirese nekuda kweDelta akasiyana. Ivo vari panzvimbo pezvo vanoda masiki ekuvhiya, masiki eN95, vharuvhu-yemahara FFP2 masiki, kana FFP3 yekufemera masiki.
Parizvino, Lufthansa, Air France, LATAM, neFinnair zvakarambidza machira ekumeso emachira pamwe chete nemasiki ane mavhavha ekurasa. Funga nezvazvo. Chifukidziro chine chiutsi chakafanana nemota ine chiutsi. Izvo zvakanaka kune mutyairi (kana mune ino kesi iye akapfeka), asi ko zvakadii nezvese munhu ari kunze kweiyo chiutsi? Mask haisi mask haisi mask.
Vhiki rino, Finnair akazova mutakuri wazvino wekurambidza machira ekumeso kumeso, achigamuchira chete masiki ekuvhiya, asina-vharuvhu FFP2 kana FFP3 yekufemera masiki, uye masiki eN95, kambani yakatumira.
Ndege dzinoda masiki ekurapa - angangoita matatu masendimita mukobvu - ndeAir France neLufthansa. LATAM inobvumidzawo KN3 uye N95 masiki. Uye seimwe chenjedzo, kune vafambi vanobatana muLima, vanofanirwa kuwedzera uye kuwedzera pane imwe mask. Icho chikonzero cheizvozvo ndechekuti izvozvi Peru ine yakanyanya kukwirisa COVID-95 mwero wekufa munyika.
MuUnited States, ndege zhinji dzinobvumidza machira ekumeso emachira asi dzakarambidza mamwe marudzi ekufukidza kumeso senge mabhanana, masikisi, masiki echikepe, gaiters, balaclavas, masiki ane maburi kana masileti erudzi chero rupi zvaro, masiki ane mavhavha ekuyeresa, kana masiki ejira. kana ivo vakagadzirwa chete kubva kune imwechete nhete yezvinhu. Vamwe vanhu vakapfeka zvipfeko zvepurasitiki, asi kana iri United Airlines, vanoti izvo hazvina kukwana kufukidza uye zvichiri kuda kumeso kumeso pamusoro peuso hwechiso. KuAmerican Airlines, ivo havatenderi masiki akasunganidzwa netubhu kana mafirita anoshandiswa nebhatiri.
US Transportation Security Administration (TSA) yakanga yapa chinosungirwa kumeso kumeso kana ichifamba pazvifambiso zveruzhinji, kusanganisira nendege nemunhandare, muna Ndira 2021. Iri mvumo raifanirwa kupera musi waGunyana 13, 2021, zvisinei, neiyo nyowani nyowani. mune COVID-19 kesi nekuda kweiyo Delta Variants, iyo mvumo yakawedzerwa kumhanya kusvika muna Ndira 18, 2022.
Daniel Cannon anoti:
Nyamavhuvhu 20, 2021 pa08: 06
Iyo data irimo. Masiki haashande! Donhedza Kutya.
Inoita kusvibisa Ocean, kukonzera utachiona Zvirwere kana kushandisa uye kudzivirira matsotsi!